Dawladda Hoose & dadweyna reer Galkacyo oo wada bilaabay olole nadaafadeed oo hor leh. – Radio Daljir
Abriil 22, 2010 12:00 b 0
Galkacyo Apr 22 – Olole nadaafadeed oo horleh ayaa ka bilawday xaafadaha kala duwan ee magaalada Galkacyo, gaar ahaanna waddada laamiga ah ee dhaxmarta magaalada Galkacyo oo ay saamayn xooggan ku yeesheen roobabkii dhawaan ka da?ay magaalada.
Olalahaan oo illaa shalay ka soconayey magaalada Galkacyo ayaa lagu beegsanayey sidii kor loogu qaadi lahaa nadaafadda magaalada iyadoo ay arrintaasi iska kaashanayeen maamulka dawladda hoose ee magaalada Galkacyo iyo bulshada ku dhaqan magaalada.
Meelaha sida gaar ah loo beesanayey, lagana qabtay shaqooyinka xooggan waxaa ka mid ah meelaha biyo fariisiga leh ee ku dhaxyaalla magaalada kuwaasi oo ay aasayeen shaqaalaha iyo gaadiidka dawladda hoose ee magaalada Galkacyo iyagoo sidoo kalana gacan buuxda ka helayey dadweynaha.
In badan 50 goobood oo ay fariisteen biyihii ka dhashay roobkii dhawaan ka da?ay magaalada Galkacyo ayaa lagu guulaysay in la aaso iyadoo loo sameeyey hab suurtogal ka dhigaya sidii aysan mar danbe biyo u fariisteen goobahaasi.
Dhanka kale waddada laamiga ah ee dhaxmarta magaalada Galkacyo ayaa iyana illaa shalay waxaa ka socotay shaqo aad u xooggan taasi oo ahayd nadiifin laamiga oo maalmihii ugu danbeeyey Boor iyo Siigo xooggan ay ka kacaysay marka ay gaadiidku maraan kaasi oo uu ku reebay roobkii dhawaan da?ay, iskastoo xalayna magaalad roob xooggan qabtay kaasi oo dhajiyey Boorkii iyo Siigadii lala dagaallamayey
In ka badan 100 shaqaale ah oo haweenka ah oo wadtay Iskoobayaal iyo Fiiqimada dhulka lagu xaaqo ayaa illaa iyo shalay ku fooraray fiiqitaanka waddada laamiga ah iyagoo dhammaan ka rogay Boorkii iyo Siigadii laamiga saarnayd taasi oo iyana lagu daabulayey Iska rogooyinka dawladda hoose oo meel dheer ku daadinayey.
Waa markii ugu horraysay oo muddooyinkii ugu danbeeyey la arko shaqaale xaaqaya waddada laamiga ah ee magaalada Galkacyo, waxayna in badan oo bulshada reer Galkacyo ah ay arrintani tusaale ugu noqotay sida dadku ay u awoodaan in ay wax qabsadaan iyagoon cidna gacan ka helin.
Burcad badeed Somali oo afduubay saddex markab oo laga leeyahay Thailand.